DAAWO Madaxweyne Hub Lasoo Galay Garoonka Iyo Garsoore Dirqi Kaga Badbaaday+SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
DAAWO Madaxweyne Hub Lasoo Galay Garoonka Iyo Garsoore Dirqi Kaga Badbaaday+SAWIRRO
Cayaar ka tirsanayd horyaalka heerka koowaad ee waddanka Greek oo u dhexaysay labada kooxood ee PAOK Salonika iyo AEK Athens ayaa la joojiyey isla markaana dib loo dhigay dhamaystirkeeda kaddib markii uu madaxweynaha kooxda PAOK garoonka lasoo galay hub.
Madaxweynahan oo lagu magacaabo Ivan Savvides ayaa garoonka soo galay wakhti ciyaartu marayso daqiiqaddii 89aad markaas oo gool offside ah laga diiday kooxdiisa.
Savvides waxa uu si toos ah u abbaaray garsooraha dhexe oo dhex-dhexaadinayey ciyaarta oo taagnaa garoonka badhtankiisa, waxaana uu gacanta midig ku qabsaday baastoolad ugu jirtay guntiga dhinaca midig (kallida agteeda), waxaana markii uu marayo garoonka dhexdiisa isku duubay ciidamada booliska ee garoonka joogay.
Lama hubo in Savvides uu doonayey inuu toogto garsooraha iyo inkale, hase yeeshee, ayaa loo kexeeyey xarun boolis.
Ciyaaryahannada AEK ayaa markaas kaddib ka dareeray garoonka waxaanay diideen inay ciyaaraan iyagoo ku dooday in ammaankoodu uu halis ku jiro mar haddii madaxii ugu sarreeyey kooxda ay la ciyaarayaan uu hub kusoo weeraray.
Muddo laba saacadood ah ayaa lad-qabe iyo sababo lagu jiray hase yeeshee, way diideen ciyaaryahannadaasi inay garoonka kusoo laabtaan. Garsooraha ayaa markaas kaddib ku dhowaaqay in ciyaarta la joojiyey, inkastoo ay ka hadhsanayd hal daqiiqo oo kaliya.
Wasiir ku-xigeenka dhaqanka iyo ciyaaraha waddanka Greece oo lagu magacaabo Georgios Vassiliadis ayaa sheegay inay go’aan adag ka qaadan doonaan arrintan.
Savvides waxa uu ka mid yahay dadka ugu taajirsan waddanka Giriiga. Waxa uu ku dhashay Georgia of Greek, horena waxa uu uga mid ahaa baarlamaanka waddanka Ruushka.
Markii uu garoonka soo galay waxa uu ciyaaryahannadiisa amar ku siiyey inay garoonka ka dareeraan ka hor intii aanay ciidamada nabadgelyadu isku duubin.
PAOK waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad ee horyaalka heerka koowaad, waxaanay laba dhibcood ka hoosaysaa naadiga hoggaanka haya ee AEK